Andriamifidisoa Zo · Aogositra 2021 · Global Voices teny Malagasy
Andriamifidisoa Zo · Aogositra, 2021
Lahatsoratra farany an'i Andriamifidisoa Zo tamin'ny Aogositra, 2021
Ahoana ny naneren'ny propagandy shinoa ny sendikan'ny mpampianatra lehibe indrindra ao Hong Kong holevonina?
Azia Atsinanana 19 Aogositra 2021
Ankilan'ny HKPTU, dia asian'ny fampitam-baovaom-panjakana shinoa ihany koa ny Fikambanan'ny mpisolovava, ny fiarahamonin'ny mpitsara, ny fikambanan'ny mpanao gazety, ny fikambanan'ny infirmiera, ny konfederasionan'ny sendikà ao Hong Kong ary ny maro hafa tsy voatanisa.
Cap Vert 17 Aogositra 2021
José Maria Neves (PAICV) sy Carlos Veiga (MPD) no hifaninana amin'ny fifidianana ho avy ao Cape Verde.
Oseania 16 Aogositra 2021
"Mijoro eto anatrehanareo aho ho mariky ny Satro-piandrianana izay nandiso anareo efa ho 50 taona lasa izay."
Nofariparitan'ny polisy ho 'asa fampihorohoroana ao an-toerana ataon'amboahaolo mandeha irery' ity tranga ity ary norangitina tamin'ny alalan'ny kabarim-pankahalana ilay lehilahy.
Afrika Mainty 13 Aogositra 2021
Takian'ny Ekipa Global Voices Afrika atsimon'i Sahara ny famotsorana tsy misy fepetra an'i Rebecca Enonchong.